Saul Bass aabihii dhibcaha filimada casriga ah | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Fanaaniin, Design Graphic, dhowr
Saul Bass aabihiis dhibcaha filimka Modernist wuxuu ahaa farshaxan casri ah oo muhiim ah oo abuuray qaar ka mid ah aqoonsiyada shirkadaha ugu muhiimsan Mareykanka. Xarun ku leh naqshadeynta garaafka iyo xayeysiinta farshaxan yahankan ayaa meel u sameeyay naftiisa aduunyada shineemo meesha bilaabay la shaqeynta filim sameeyayaasha si fiican loogu yaqaan Alfred Hichcock laftiisa.
Un qaabka intaas isku darsaday qaababka joomatari macquul ahayn iyadoo midabbo aad u dheregsans waxay dhalisay waxa noqon lahaa Qaabka Saul Bass. Waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid kamid ah waalidiinta hogaaminaya cinwaanada amaahda si loogu abuuro cinwaanno firfircoon meesha wuxuu isku darsaday qaabkiisa shaqsiyadeed iyo sheekooyin shaxan oo yarLaga soo bilaabo xilligaas adduunyada shineemadu weligeed isku mid ma noqonayso.
Saa'uul baass Kaliya uma istaagin cinwaannada amaahdiisa laakiin sidoo kale wuxuu u sameeyay kan Naqshadeynta boodhadhka halkaas oo uu ku guuleystay inuu abuuro naqshado isagoo adeegsanaya qaabab fudud.
Haddaan si dhow u eegno Qaabka Saul Bass waxaan ogaanay sida uu isugu daray Midabada fidsan dhergaan leh qaabab quruxsan oo fudud, oo ahaan jirtay silhouettes. Walxahaas oo is biirsaday midba midka kale waa lagu guuleystay halabuur aad u yaab badan oo ay u fududahay daawadayaashu inay fahmaan, waana sababtaas sababta qaabkiisa uu waqtigaas muhiimka ugu ahaa.
Qaabkiisa kaliya kuma uusan ekaanin dunida boodhadhka laakiin sidoo kale waxaa loo qaaday cinwaanada amaahda halkaas oo aan ku abuuray wax gebi ahaanba ku cusub adduunka shineemo waqtigaas, sheekooyin yar yar ayaa iftiinka ka arkay dhammaan filimadaas oo Bass weyn ay ka qeyb galeen.
Waxaan arki karnaa qaar ka mid ah cinwaanada amaahda fiidiyowgan yar:
Waa xiiso leh in la fiirsado Saul Bass shaqooyinka shirkadaha maxaa yeelay isaga qaabka mashruucan noocan ah waxay ahayd gebi ahaanba ka duwanAhaanshaha sawirro shirkadeed, soo jeedintii Bass waxay ahaayeen kuwo aad u nadiif ah laakiin leh natiijooyin isku mid ah oo la yaab leh. Waan fiirsan karnaa qaar ka mid ah aqoonsiyada shirkadaha uu naqshadeeyay Saul Bass oo aynaan u muuqan mid qaddarinaya qaabka qallafsan ee aan ku aragnay naqshadeynta boodhadhka. Si aad u xeel dheer haddii ay run tahay inuu adeegsaday midabbo fidsan oo aad u cufan laakiin markuu la macaamilayo astaamo waa wax aad u badan, si la mid ah ayuu uga soo muuqday waaxdan.
Farshaxaniste weyn oo casri ah oo leh qaab aad u gaar ah oo astaan ​​u ah ka hor iyo kadib adduunyada shineemooyinka shaashadda iyo shaashadda labadaba qaabkiisa gaarka ah ee uu u arko adduunka farshaxanka garaafka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Saul Bass aabihiis dhibcaha filimka